Nagu Saabsan - Jiangsu Senwei Electronics Co., Ltd.
Jiangsu Senwei Electronics Co., Ltd. waa adeeg bixiye adeeg maareyn tamarta oo dhameystiran oo leh maareyn tamar caqli badan sida ganacsigiisa udub-dhexaadka ah, oo bixiya adeegyo hal-joog ah sida qalabka cabirka, qalabka isgaarsiinta, kumbuyuutarka daruuraha, is-dhexgalka nidaamka, hawlgalka nidaamka iyo dayactirka la xiriira tamarta. cabbiraadda iyo maaraynta.
Shirkaddu waxay sameysaa godad casriyeyn oo caqli-gal ah, korantada keydinta tamarta, xargaha korantada, mitirka tamarta korantada smart, DIN-tareenka nooca mitirka tamarta korantada, mitirka korantada oo horay loo bixiyay, mitirka tamarta elektiroonigga ah ee shaqeynaya, mitirka kormeerka, qeybta xog aruurinta. , aaladaha dijitaalka ah ee kumbuyuutarrada badan, mitirka biyaha, Terminalka, DTU, RTU, mashiinka maareynta iyo isku duwaha ururinta macluumaadka korantada, iyo xalka farsamada ee alaabada kor ku xusan.
Shirkaddu waxay leedahay koox dhalinyaro ah, xirfad leh, laf dhabarta farsamada tayo sare leh iyo laf-dhabarka maaraynta. Shirkadda waa urur ku saleysan daraasad oo dhiirigeliya barashada shaqada, ka shaqeynta waxbarashada, kuna nuuxnuuxsada waxoogaa yar oo horumar ah maalin kasta.
Hal-abuurnimada ayaa ah raadinta weligeed ah ee badbaadinta dadka, oo leh hal abuur tikniyoolajiyadeed loogu talagalay horumarka, hal-abuurka maaraynta ee faa iidada, halbeegga, takhasuska, fikradaha maamul ee barnaamijyada leh had iyo jeer naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka, adeegga macaamiisha, iwm, iyo sameynta tayada waxsoosaarka ugu fiican iyo heerka adeegga koowaad.
Jiangsu Senwei Electronics Co., Ltd. had iyo jeer waxay u hogaansan tahay tikniyoolajiyadda ku saleysan teknolojiyadda iyo suuq-ku-shaqeynta suuqa, waxayna ixtiraamtaa falsafadda ganacsiga ee "is-abuurka, wadaagista, horumarka, iyo wax wadaagga". Himiladeenu waa inaanu diiradda saarno maaraynta tamarta oo aan gacan ka geysanno ilaalinta tamarta iyo dhimista qulqulatada. Qorsheheennu waa inuu noqdaa bixiyaha adeegga heerka koowaad ee maareynta tamarta smart. Iyadoo maskaxda lagu hayo fikirka ah natiijooyinka daacadnimada iyo guusha-guuleysiga, waxaan ballan qaadeynaa inaan siinno alaabo iyo adeegyo ka wanaagsan macaamiil kasta. Xubin kasta oo ka tirsan shirkadeena waxay u tixgeliyaan hal-abuurnimada inay yihiin hamigooda weligiis ah. Waxaan, sida had iyo jeer, u siin doonnaa ciyaar buuxda si loogu helo faa'iidooyinkeena teknolojiyada xagga cabirka tamarta iyo maareynta si aan uga caawino macaamiisheenna gaarista himilooyinka isticmaalka tamarta sayniska, ilaalinta tamarta iyo yaraynta isticmaalka. Markaan tan sameyno waxaan sameyneynaa kaalinteenna ku aaddan xagga badbaadinta bulshada iyo bey'ada bulshada u wanaagsan.